iCloud dia efa mamela antsika hamerina rakitra voafafa | Vaovao IPhone
Tadidiko herintaona lasa izay rehefa nanomboka niainga ny Telegram. Tsy mbola fantatro ny antony, fa nofafako hatramin'ny avo roa heny ny fifandraisako rehetra izay nampiasa ilay fampiharana. iCloud dia tonga lafatra amin'ny fanaovana backup ao anaty rahona fa, raha nifandrindra foana izy io, toy ny tranga nisy ahy, rehefa nesorina tamin'ny iPhone izy, dia voafafa ihany koa avy amin'ny iCloud, ka very ny fifandraisana nefa tsy afaka nanao zavatra betsaka momba izany. izany. Nanomboka tamin'izay, Notehiriziko tamin'ny solosaina ny nomaniny ho solon'izay hahafahako mamerina azy ireo raha manana olana mitovy amin'izany indray aho.
Tsy azoko mihitsy hoe nahoana i Apple no mampiasa Time Machine ho an'ny backup X X ary na dia ho an'ny antontan-taratasy aza dia tsy nisy azo antoka fa tsy namoy fampahalalana tena lehibe toy ny fifandraisanay izahay, fa soa ihany, Azo atao izao ny mamerina amin'ny laoniny ny fifandraisana, ny fisie ary ny kalandrie avy amin'ny iCloud mba tsy hanahy intsony isika (somary sarotra taorian'ilay zavatra niainako tamin'ny Telegram) noho ny fahaverezan'ny fampahalalana ity.
Ny fahafaha-manarina ireo rakitra ireo dia azo alaina avy icloud.com ary tena tsotra ny fanatanterahana azy. Mba hanaovana izany dia tsy maintsy manao izao manaraka izao isika:
Ahoana no fanarenana angona avy amin'ny iCloud.com
Manokatra ny Fikirana.
Eo amin'ny zoro ambany ankavia, ao Advanced, misafidy isika iray amin'ireo safidy telo.
Safidintsika hoe inona ny karazana angona tianay haverina sy hikitika indray.
Eo ambanin'ny karazana famerenana amin'ny laoniny hahita fampitandremana maromaro isika. Raha ny fisie kosa dia tsy mahita fampitandremana isika satria tsy misy na inona na inona soloina, dia ampiana fotsiny ihany. Rehefa sitrana ny fisian'ny rakitra iray dia mampitandrina antsika izany ny fifandraisana rehetra misy dia hosoloin'ireo daty voafantina ary, ho fepetra fiarovana, ny backup dia hatao amin'ny fandaharam-potoana ananantsika amin'izany fotoana izany. Rehefa mamerina ireo kalandrie dia ampandrenesina isika fa zavatra mitovy ihany no hitranga amin'ny fifandraisana, ho fanampin'ny hamafana ny fampahalalana zaraina rehetra ary ny hetsika voalahatra rehetra dia hofafana sy averina averina, noho izany dia ho hitan'ny vahiny ny fanafoanana aloha ary avy eo fanasana vaovao.
Na dia amin'ny androny aza dia tsy maintsy mangataka ny hamerenako ny fifandraisana aho ary ho ahy dia somary tara io, tara kokoa noho ny tsy misy ary faly aho fa nieritreritra an'izany i Apple. Averiko, tara, fa afaka mamafa ny fampirimana misy ahy miaraka amin'ny nomaniny ho solon'izay fifandraisako aho.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » iCloud » iCloud dia efa mamela antsika hamerina ny fifandraisana sy ireo karazana rakitra voafafa
Sarintany ivelany amin'ny iPhone dia mora be tsikelikely